Milishaan naannoo Amaaraa Bulchiinsa Naannoo Oromiyaa Seeenuun Goolamaafi Badii Inni Qaqqabsiise Ilaalchisee Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname – Adda Bilisummaa Oromoo
Milishaa fi humni addaa naannoo Amaaraa meeshaa waraanaa hidhachuun naannicha keessa, Godina Addaa Bulchiinsa Oromiyaa aanaalee akka Haxaayee, Afraataa, Jiillee fi bakkoota biroo keessatti uummata meeshaamaleeyyii irratti dhukaasuun balaa qaqqabsiisaa akka jiran gabaasaaleen maddeen amanamoorraa nugahaa jira. Bulchiinsi naannoo Amaraa ibsa Bitootessaa 21, bara 2021 baseen, nagaa buusuu fi ol-aantummaa seeraa kabachiisuuf sababa jedhuun milishoota isaa naannoo Oromiyaa bakkoota adda addaatti bobbaasuusaa ifatti amaneera. Gaffii guddaan jiru garuu, aanaalee jedhaman sana keessatti sodaan nageenyaa osuma jiraateellee humni nageenyaa Oromiyaa osoo jiruu naannoon Amaaraa maaliif milishaa fi humna addaasaa daangaa Oromiyaa cabsee seensisee kan jedhu dha. Kanaan duras taanaan, sababa hin taane wal-fakkaataa dhiheessuun heera biyaa cabsuun mootummaa Itoophiyaatiif waan baratamaa dha. Inni kunis kan addaa miti.
Caalaatti kan mirkaanaawu tahus, maxxansaaleen aaraa-gubataa sabaa-himaalee hawaasaarratti bahan Haxaayee, Afraataa fi Jiillee keessatti milishaan naannoo Amhaaraa dhukaasa guddaa banuun uummata nagaarratti miidhaa qaqqabsiisuu akka hin hafne argisiisa. Addi Bilisummaa Oromoo (ABO) haleellaan gatii hin qabne kuni kan uummataa nagaa fi qabeenya isaaniirratti xiyyeeffate hatattamaan dhaabbatee, milishootni aanaalee sana keessatti bobbaafaman dafanii akka gadhiisanii bahan gaafta. Akkuma naannoo Tigiraayii fi Beenishaangul-Gumuz keessatti qabataamaan argamettis, milishaan naannoo Amaaraa daangaa naannolee cabsanii seenuun uummata fayyaaleyyi irratti dhukaasa bananii miidhaa qaqqabsiisu. Gochi anatu-caalaa akkasii kunimmoo lolli sabummaa irratti hundaawe saboota gidduutti akka ka’u taasisa.